Okwu Azụmaahịa maka Nchịkwa Ahịa Dijitalụ | Martech Zone
Mọnde, Jenụwarị 27, 2014 Mọnde, Jenụwarị 27, 2014 Jenn Lisak Golding
N'ime ụwa ebe a na-echekwa ọtụtụ faịlụ anyị (ma ọ bụ niile) na ntanetị n'ofe òtù, ọ dị oke mkpa na anyị nwere ụzọ maka ngalaba na ndị mmadụ n'otu n'otu iji nweta faịlụ ndị a n'ụzọ a haziri ahazi. Ya mere, ihe ewu ewu nke ihe nchịkwa dijitalụ (DAM), nke na-enye ndị ọrụ ohere bulite faịlụ imewe, foto ngwaahịa, ihe ngosi, akwụkwọ, wdg. Na ebe nchekwa na-enwerịrị ike ịnweta site na ndị ọzọ. Na mgbakwunye, ọnwụ nke akụ dijitalụ na-agbadata!
Mụ na ndị otu rụkọrọ ọrụ na Widen, a ihe nchịkwa dijitalụ njikwa, na infographic a, na-enyocha okwu azụmahịa maka njikwa ihe dijitalụ. Ọ bụ ihe nkịtị maka azụmaahịa iji draịva ejiri ma ọ bụ rịọ ka ndị ọzọ ziga faịlụ site na email, mana ndị a abụghị ihe akaebe. Na nyocha emere n'oge na-adịbeghị anya, 84% nke azụmaahịa na-akọ na ịchọta akụ dijitalụ bụ nnukwu nsogbu ha nwere mgbe ha na-arụ ọrụ na akụ dijitalụ. Amaara m otu nnukwu ihe mgbu ọ bụ na oge na-efu mgbe m na-enweghị ike ịchọta faịlụ na ndekọ email m ma ọ bụ na folda kọmputa m. Ma were ya na obi nkoropụ na nnukwu ụlọ ọrụ ọnọdụ na ọtụtụ ndị ọrụ; nke ahụ bụ ọtụtụ oge furu efu, arụmọrụ, na ego.
Ọzọkwa, ọ na-ebute nsogbu n'etiti ngalaba. 71% nke ndị otu nwere nsogbu na-enye ndị ọrụ ndị ọzọ ohere ịnweta akụ n'ime otu ndị ahụ, nke na-ebelata mmekọrịta n'etiti ngalaba. Ọ bụrụ na enweghị m ike ịnye onye mmebe m akwụkwọ ọdịnaya dị mfe, mgbe ahụ ọ nweghị ike ịrụ ọrụ ya. DAM na-enye ụzọ maka onye ọ bụla nọ na nzukọ ahụ ịnweta akụ dijitalụ niile ha chọrọ na nchekwa nchekwa. Na DAM, a na-eme ihe ọsọ ọsọ ma rụọ ọrụ nke ọma.
Are na-eji ngwọta njikwa akụ dijitalụ ugbu a? Kedu ụdị nsogbu ị na-enwe mgbe ị na-emeso akụ dijitalụ na nzukọ gị?
Tags: content Marketingdamihe igwe di iche ichenjikwa ihe onwunwe dijitalụoyiyimwekotaVidio Ahịaebe nchekwaihe omuma vidiyonchekwa vidiyogbasaa
LinkedIn: Ndị ọkachamara na 25 Social Media na-eso